Takasikwa naMwari Here Kana Kuti Takabva Kumhuka?—Nei Tichiti Hatina Kubva Kumhuka? | Vechiduku Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kazakh (Arabic) Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Mongolian Myanmar Norwegian Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Takasikwa naMwari Here Kana Kuti Takabva Kumhuka—Chikamu 2: Nei Zviine Musoro Kuti Titi Hatina Kubva Kumhuka?
Alex haachazivi kuti chokwadi ndechipi. Kukura kwake aiti Mwari ndiye akasika zvinhu zvose. Asi nhasi ticha wake webiology anga achiti zvinhu zvakaita zvokushanduka-shanduka uye kuti masayendisiti anozvitsigira. Alex haadi kusekwa saka azongoguma afunga kuti, ‘Kana masayendisiti aine umboo hunoratidza kuti zvinhu zvakaita zvokushanduka-shanduka, iniwo chii chandingazotaura?’
Zvakaitika kuna Alex zvakamboitikawo here kwauri? Zvimwe kukura kwako waiziva kuti Bhaibheri rinoti: “Mwari akasika matenga nenyika.” (Genesisi 1:1) Asi iye zvino kwava nevanhu vanotaura zvinhu zvinoita kuti ufunge kuti zvinhu zvakaita zvokushanduka-shanduka. Wobvuma izvozvo here? Nei zviine musoro kuti titi zvinhu hazvina kuita zvokushanduka-shanduka?
Zvinhu 2 zvinoita kuti titi zvinhu hazvina kuita zvokushanduka-shanduka
Mibvunzo yokufunga nezvayo
Masayendisiti haabvumirani panyaya yokushanduka-shanduka. Masayendisiti ava nemakore akawanda achitsvakurudza nezvenyaya iyi asi nanhasi havasati vava netsanangudzo yavanonyatsowirirana vose.
Zvokufunga nezvazvo: Zvavari ivo vanozviti vanoziva asi vachitadza kuwirirana panyaya iyi, zvinganzi wakanganisa here kana ukasabvuma kuti zvinhu zvakaita zvokushanduka-shanduka?​—Pisarema 10:4.
Kuziva chokwadi kunokubatsira muupenyu. Mukomana anonzi Zachary akataura kuti, “Kana zvinhu zvakangoerekana zvavapo netsaona, zvinoreva kuti upenyu hwedu hauna chinangwa.” Zvaakataura zvine musoro. (1 VaKorinde 15:32) Asi kana kuri kuti zvinhu zvakaita zvokusikwa, mibvunzo yedu panyaya yokuti takasikirwei uye kuti takanangepi inogona kupindurwa.​—Jeremiya 29:11.
Zvokufunga nezvazvo: Kuziva chokwadi nezvenyaya iyi zvine zvazvinokubatsira here muupenyu?​—VaHebheru 11:1.
ZVINOTAURWA NEVAMWE: ‘Zvinhu zvose zvakavapo netsaona (big bang).’
Ndiani akakonzera tsaona yacho?
Zvine musoro ndezvipi, kutaura kuti zvinhu zvakavapo netsaona, kana kuti zvakaitwa nomumwe munhu?
ZVINOTAURWA NEVAMWE: ‘Vanhu vakabva kumhuka.’
Kana vanhu vakabva kumhuka dzakafanana nemakudo nei vanhu vaine pfungwa dzakapinza kudarika makudo? *
Upenyu hwevanhu kunyange hwemhuka hunoumbwa nemasero (cells). Asi sei zvakaoma kunzwisisa mashandiro emasero acho? *
ZVINOTAURWA NEVAMWE: ‘Pane umboo hwokuti zvinhu zvakashanduka-shanduka.’
Munhu ari kutaura izvozvo akanyatsoongorora pachake here kuti aone kana zvaanotaura zviri zvechokwadi?
Vangani vanoti zvinhu zvakaita zvokushanduka-shanduka zvichingobva pakuti vakaudzwa kuti masayendisiti uye vanhu vanoremekedzwa vanotsigirawo nyaya yacho?
“Ngatitii mumwe munhu okuudza kuti pane fekitari inoprinda mabhuku yaputika uye ingi yamwayiwa pose pose uye paita chishamiso chokuti paerekana pagadzirika bhuku. Ungazvibvuma here? Kurongeka kwakaita zvinhu muchadenga uye panyika kunganzi kwakangoerekana kwaitika here?”
“Nyaya yokushanduka-shanduka inoti zvinhu pazvinooma vakasimba ndivo vanosara vachirarama. Kana ichi chiri chokwadi sei vanhu vachibatsirana munguva dzourwere kana dzenhamo kuti vararamisane?”
“Paunenge uchifamba musango, ukaona imba yakanaka yemapuranga, ungati here: ‘Pane miti yadonha zvakarongeka pachibva pagadzirwa imba iyi.’ Haumbofi wakadaro! Hakuna zvinhu zvakadaro zvingaitika. Saka nei tingati zvinhu zvose zviri muchadenga nepanyika zvakangoerekana zvavapo?”
^ ndima 10 Vamwe vanoti pfungwa dzevanhu dzakakura kudarika dzemakudo ndokusaka tichiadarika pakufunga. Verenga kabhuku kanonzi The Origin of Life—Five Questions Worth Asking, papeji 28 uone kuti nei izvi zvisina musoro.
^ ndima 11 Verenga kabhuku kanonzi The Origin of Life—Five Questions Worth Asking, mapeji 8-12.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Takasikwa naMwari Here Kana Kuti Takabva Kumhuka—Chikamu 2: Nei Zviine Musoro Kuti Titi Hatina Kubva Kumhuka?
ijwyp nyaya 33